बहुरुपियाँ नेता बाबुराम | सहारा टाइम्स
Home » Bichar » बहुरुपियाँ नेता बाबुराम
बहुरुपियाँ नेता बाबुराम
यहाँ नेताहरू भूगोल अनुसार आफ्नो भेषभुषा र भाषा फेरेका थुप्रै उदाहरणहरू छन ।
भित्री पहाड़मा जांदा-
"मधेश भन्ने कुनै भूभाग नेपालमा छैन, त्यहां बस्नेहरू सब भारतबाट आएका छन र मधेशलाई भारतमा गाभ्नको लागी आंनदोलनको नाटक गर्दैछन्।"
त्यही नेताको अभिव्यक्ति काठमाण्डूमा-
"मधेशीको सबै माग संविधानमा समेटिएका छन्, यदि कुनै जायज माग छुटेको छ भने हामी वार्ता र सवांद द्वारा समेटने प्रयास गर्छौं ।"
र त्यही नेता मधेशमा जाँदा,
"मधेशीसँग विभेद भएको छ, मधेशको माग संविधान संसोधनबाट सम्बोधन गर्नै पर्छ, मधेशको समस्या समाधान नगरि संविधान लागु हुन सक्दैन।"
भारतमा जाँदाको कुरै छोडौं-
"म भारत कै छोरा हुँ, तपांईहरू चाहे अनुसार नै सब थोक हुन्छ, आफ्नो आशिर्वाद निरन्तर राख्नु होला!"
यस्तै बहुरूपियाको बिचमा बाबुरामजीलाई पनि लिन सकिन्छ। संविधानसभाको थुप्रै समितिमध्ये संवाद समिति एक थिए जसका अध्यक्ष बाबुरामजी नै थिए। संविधान निर्माण र जारी गर्नमा उहाँको प्रमुख भूमिका थियो।
प्रश्न उठ्छ- के बाबुरामजीलाई थाहा थिएन कि जारी भईरहेको संविधानमा मधेशीको माग समेटिएका छैन। यदि थियो भन्ने उहाँले त्यही बेला विरोध किन जनाउनु भएन ? हो देशले संविधान पाउनु आवश्यक थियो तर एउटा ठुलो समुदायलाई पाखा राखेर संविधान जारी गरे पछिको अवस्था सबैको सामुनेमा छ। ५५ जनाले शहादत दिसकेका छन र देश अशान्त छ। बाबुरामजी जस्तो पढेलेखेका चुस्तफूर्त नेता संविधान जारी गरेको बेला आफ्नो भूमिका ईमान्दारी साथ वहन गरेको भए आज यो अवस्था आउने थिएन।
यसलाई यसरी बुझन् सकिन्छ- "शोषण, उत्पिडन र विभेदमा परेकाहरू लाई अधिकार दिने बेलामा सबै शीर्ष नेताहरु नंगमासु जस्तै यसरी एक हुन्छ मानौं सबैको डीएनए एकसमान छ तर जब सरकारमा जाने विषय आंउछ सबै एक अर्कोको विरोध गर्न शुरू गर्छ।"
भित्री रूपमा यिनीहरू एक नै हुन, सरकार बनाउनलाई पनि सिण्डीकेट लागेको नै छ। आफ्नो पालो नभएको बेला देखाउनलाई मात्र विरोधको नाटक गरि रहन्छ।
अहिले बाबुरामजी बढी समय मधेशमा खर्ची रहेको छ त्यो पनि यंहिको पहिरणमा। सबलाई थाहा छ सत्ता समीकरणको लागी मधेशको भोट प्रमुख भूमिका खेल्छ। त्यही भोट बैंकको खोजीमा कतै नया शक्ति पनि त छैन ?
मधेशले बहुरूपियाहरू लाई पहचान गर्न एकदम आवश्यक छ। बहुरूपियाहरू पहाड़ बाट मात्र होईन मधेशबाट पनि हुन सक्छ। मधेशले मात्र किन सम्पूर्ण देशले बहुरूपियाहरू को पहचान गरि तिनीहरू लाई पाखा लगाउन आजको आवश्यकता छ..!!